Coronavirus တွင် SEO ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်ပါသလား။ Semalt အဆိုပါအဖြေကိုသိတယ်
သငျသညျအတိတ်လအနည်းငယ်အဘို့ကျောက်အောက်မှာနေထိုင်ခဲ့မဟုတ်လျှင်, သင် 2020 2020 coronavirus ကူးစက်ရောဂါ၏နှစ်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုသင်သတိပြုမိပေမည်
သို့သော်၎င်းသည် SEO နှင့်မည်သို့သက်ဆိုင်သနည်း။ ကောင်းပြီ၊ တကယ်တော့တော်တော်များများ။
Coronavirus ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကြောင့်ကုမ္ပဏီများစွာသည်၎င်းတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ရွေ့လျားစေခဲ့သည်။ မကြာခဏပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဘို့။
လူများသည်သူတို့၏နေအိမ်များနှင့်ဝေးလံခေါင်ဖျားသောအလုပ်များကိုလုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်နေသည်။ ဒါ့အပြင်မကြာခဏပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဘို့။
ရလဒ်အနေနှင့်အင်တာနက်သုံးစွဲမှုနှုန်းသည်တဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီများသည်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့ ပြောင်းလဲ၍ အိမ်မှ ၀ န်ထမ်းများအတွက်ရေရှည်ရွေးချယ်မှုများပြုလုပ်သောကြောင့်ထိုနည်းအတိုင်းဆက်ရှိနေမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာကျွမ်းကျင်သူများက e-commerce နှင့် digitalisation ကိုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ပြီးနောက်အုတ်များနှင့်မော်တာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှလွှဲပြောင်းယူလိမ့်မည်။ တစ်ညနီးပါး။
ဆိုလိုသည်မှာအွန်လိုင်းကမ္ဘာသည်လူ ဦး ရေထူထပ်လာတော့မည်ဖြစ်ရာယခင်ကထက်ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် SEO တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ပို၍ အရေးကြီးလာသည်။
Coronavirus နှင့် SEO
coronavirus မတိုင်မီ e-commerce နှင့်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ပုံမှန်တိုးတက်မှုကိုခံစားနေရသည်။ သို့သော်ကူးစက်ရောဂါသည်စျေးဝယ်သူများနှင့်အွန်လိုင်းပေါ်မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဦး ဆောင်နေသူဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်သင်၌အွန်လိုင်းစီးပွားရေးရှိသော်လည်းသင် SEO အကြောင်းသိပ်မသိလျှင်၊ ၎င်းသည် SEO SEO ကိရိယာများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။
ဟုတ်တယ်၊ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကငါတို့လမ်းကို ဦး တည်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။
ဘယ်လိုလဲ? သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသေချာစေရန် - ထိပ်တန်းအခြေအနေနှင့်ဂူဂဲလ်ကဲ့သို့သောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များမှရှာဖွေရန်သင့်တော်သည်။
သင်မသိသေးပါက SEO သည် Search Engine Optimization ကိုဆိုလိုသည်။
ဆိုလိုသည်မှာရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုအင်တာနက်၏ကျယ်ပြန့်သောကမ္ဘာတွင်ရှာဖွေနိုင်စေရန်အတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်နည်းစနစ်များကို ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုလုံးတွင်ဖြန့်ကျက်ထားသည်။
အွန်လိုင်းပေါ်တွင်အကြောင်းအရာများစွာပါ ၀ င်သောကြောင့်လူစုလူဝေးတွင်ဘလော့ဂ်တစ်ခု၊ ဆင်းသက်ရန်စာမျက်နှာတစ်ခုသို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုလုံးအတွက်လွယ်ကူသည်။ သို့သော်အကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင် algorithms များပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်လေလေ ပို၍ ယှဉ်ပြိုင်လေလေဖြစ်သည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်ရလဒ်များတွင်ပိုမိုမြင့်မားလာသည်နှင့်အမျှ။
ဖြစ်သင့်သည်၊ သို့သော်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည်သူတို့၏ algorithms ကိုပုံမှန်ပြောင်းလဲသည်။ ဒါကြောင့်မနှစ်က၊ ဒါမှမဟုတ်ဒီနှစ်စောစောပိုင်းမှာဘာလုပ်ခဲ့လဲ၊ အခုအလုပ်မဖြစ်ဘူး။
သော့ချက်စာလုံးများသည်လူများအားအွန်လိုင်းတွင်ရှာဖွေနေသည့်တစ် ဦး ချင်းစကားလုံးသို့မဟုတ်စကားစုများဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ချောကလက်ကိုရှာဖွေနေသူတစ် ဦး သည် Google သို့ "အကောင်းဆုံးနို့ချောကလက်" သို့မဟုတ် "လွတ်လပ်သောချောကလက်ပြုလုပ်သူ" ဟုရိုက်ထည့်နိုင်သည်။ ထိုစကားလုံးများကိုသင့် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ပါအကြောင်းအရာများတွင်မှန်ကန်သောနေရာများတွင်ဖော်ပြပါကဂူးဂဲလ်သည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုရှာဖွေပြီးရလဒ်များအတွင်းတွင်အဆင့်သတ်မှတ်မည်။
သို့တိုင်တိုင်သော့ချက်စာလုံးများသည်ထိပ်ဆုံးနေရာများကိုထိရောက်သောအာမခံချက်မဟုတ်ပါ။ ထို့နောက် meta tags များ၊ ခေါင်းစီးများနှင့်ရုပ်ပုံများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ link တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ထူးခြားသောအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်သည်။
SEO နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်သူများသည်စီးပွားရေးဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ဂုဏ်သတင်းကိုမြှင့်တင်ရန်ကျွမ်းကျင်ကြသည်။ ဤကဲ့သို့သောအချိန်များတွင်ကျွမ်းကျင်မှုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းကရှည်လျားသောလမ်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
သငျသညျ Semalt နှင့်အကျွမ်းတဝင်မရှိသေးလျှင်, ဒီမှာနိဒါန်းအမြန်နိဒါန်းဖြစ်ပါတယ်။
Semalt သည်ယူကရိန်းနိုင်ငံ၊ ကိယက်ဗ်မြို့အခြေစိုက် Full-stack Digital Agency ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်တီထွင်ဖန်တီးမှုရှိသော IT နှင့်စျေးကွက်ပညာရှင် ၁၀၀ ကျော်ပါ ၀ င်သည့်အဖွဲ့ ၀ င်တစ် ဦး ဖြစ်သော Pet Turtle Turbo ရှိပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဖောက်သည်များနှင့်လည်းအလုပ်လုပ်သည်။
Semalt ရှိအဓိက ၀ န်ဆောင်မှုများသည် SEO မြှင့်တင်ရေး၊ web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အဆင့်မြင့်သရုပ်ခွဲဆန်းစစ်မှုနှင့်ရှင်းပြသူဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာတွင်အခိုင်အမာအမြစ်တွယ်နေသောနောက်ခံတစ်ခုကြောင့် Semalt သည်သုံးစွဲသူများကိုဂူးဂဲလ်ရှာဖွေမှု၏ထိပ်ဆုံးသို့နှစ်များစွာကြာအောင်ထူးခြားသော SEO ဖြေရှင်းချက်များကိုဖန်တီးခဲ့သည်။
အဘယ်ကြောင့်? ဘာလို့လဲဆိုတော့ထိပ်ဆုံးနေရာမှာပေါ်လာတာက web traffic ကိုတိုးစေရုံသာမကမြင်သာမှုကိုတိုးပွားစေရုံသာမကနောက်ဆုံးမှာဖောက်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်စေလို့ပါ။
ထို့ကြောင့် SEO သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အလားအလာရှိသောစီးပွားရေးကျဆင်းမှုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည့်အခါ၌ပင်။
စိတ်မချသေးဘူးလား။ ရဲ့ Semalt အောင်မြင်မှုပုံပြင်ကိုကြည့်ကြပါစို့။
များအတွက်ယူကေအခြေစိုက်အွန်လိုင်းပေါ်တယ် franchise ရှာဖွေနေခြင်းနှင့်ဝယ်ယူ သူတို့ရဲ့ website ကိုအော်ဂဲနစ်အသွားအလာတိုးမြှင့်ချင်တယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်အပြိုင်အဆိုင်နယ်ပယ်တွင်လည်ပတ်နေသဖြင့် Pay Per Click (PPC) စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများသည်လုပ်ဆောင်ရန်အလွန်ကြီးသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်သည်အသွားအလာပိုမိုထုတ်လုပ်ရန်စျေးသိပ်မကြီးသည့်နည်းလမ်းတစ်ခုအတွက် SEO ကိုရှာဖွေခဲ့သည်။
Semalt နှင့်ကိုးလအကြာတွင်ရလဒ်များမှာ -
အော်ဂဲနစ်အသွားအလာ ၃၀၃ ရာခိုင်နှုန်းအထိတက်လာသည်
TOP-10 အတွက် 5.782 သော့ချက်စာလုံးများ
တစ်လလျှင်လည်ပတ်မှု ၂,၁၈၄ ဦး တိုးတက်ခဲ့သည်
၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏ PageSpeed ​​စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်နည်းပညာအမှားများကိုပြုပြင်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးပေါ် sitemap ပုံဖော်ခြင်းတို့ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ပုံများကိုလည်း alt tags များဖြင့်သော့ချက်စာလုံးများနှင့်အတူ optimized ခဲ့ကြသည်။
ထို့နောက် Semalt သည် franchises အမျိုးအစားများနှင့်သက်ဆိုင်သောသော့ချက်စာလုံးများကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ရန် link link campaign ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကို Google TOP-10 တွင်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းခံရပြီးဒုတိယအကြိမ်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတစ်ခုနှင့်အပြိုင်မြင့်မားသောယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသော Google TOP-5 ရာထူးသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ရလဒ်အနေနှင့်ဖောက်သည်သည်ယခုအခါ franchise အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်းတွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်မပြည့်မီ Semalt နှင့်အတူစွဲမှတ်ဖွယ်ရလဒ်များ။
Semalt တွင် SEOSE နှင့်စတင်ရန်နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိသည် - AutoSEO နှင့် FullSEO ။
ဆိုက်အသွားအလာတိုးမြှင့်လိုသောသေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်, AutoSEO အလွန်ကြီးစွာသောအစမှတ်ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါ။ သို့မဟုတ်သင်ပထမ ဦး ဆုံးအစိုင်အခဲရလဒ်အချို့ကြည့်ချင်ပါသလား? ထိုအခါ AutoSEO သည်အထူးသဖြင့်အစပြုသူများအတွက် SEO ကိုရှာဖွေရန်စျေးသိပ်မကြီးသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
၀ န်ဆောင်မှုသည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ အစီရင်ခံစာတစ်ခုမှစတင်သည်။ ထို့နောက်တွင် SEO ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး မှအမှားများကိုရှာဖွေပြီးတိုးတက်မှုများကိုဖော်ထုတ်ရန်အပြည့်အဝဆန်းစစ်မှုပြုလုပ်သည်။
နောက် SEO Engineer သည်သက်ဆိုင်ရာ traffic-generate သောသော့ချက်စာလုံးများကိုရွေးချယ်သည်။ Semalt ၏နည်းပညာသည်နယ်ပယ်နှင့်သက်ဆိုင်သောဝက်ဘ်ရင်းမြစ်များနှင့်ချိတ်ဆက်မှုကိုစတင်သည်။ ဆိုက်များနှင့်ဒိုမိန်းအသက်အရွယ်နှင့် Google Trust အဆင့်အရရွေးချယ်သည်။
ကိရိယာများပြီးသည်နှင့် Semalt သည် AutoSEO ဖောက်သည်များအားသော့ချက်စကားလုံးများဘယ်မှာရှိသည်ကိုနေ့တိုင်းနောက်ဆုံးသတင်းများပေးသည်။ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏အောင်မြင်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်အဖွဲ့သည်ပုံမှန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအစီရင်ခံစာများကိုလည်းပြင်ဆင်သည်။
ဤအရာအားလုံးသည်ဝဘ်ဆိုက်အားရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုအရှိန်မြှင့်ရန်ကူညီပေးသည်၊ AutoSEO က ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းထိရောက်မှုရှိသည်။
FullSEO နောက်ထပ်ခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ပိုမိုကြီးမားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီအမြောက်အများရှိသူများအတွက်ပေါင်းစပ်ထားသော SEO ဖြေရှင်းချက်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ပိုက်ဆံအနည်းငယ်သာရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အဆင်သင့်ရှိတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဒီဟာကအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါ။
FullSEO အထုပ်သည်နက်ရှိုင်းသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအပေါ်အခြေခံပြီးထူးခြားသည့်အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုကိုအာရုံစိုက်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာဝက်ဘ်ဆိုက်အသွားအလာသိသိသာသာတိုးတက်မှုနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုအား Google-TOP သို့ပို့ရန်ဖြစ်သည်။
FullSEO နှင့်အတူ Semalt ၏အဖွဲ့သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်သည် SEO စံနှုန်းများနှင့်အပြည့်အ ၀ ကိုက်ညီစေရန်သေချာသည်။ ဒါကိုလုပ်တယ်
သော့ချက်စာလုံးများအတွက် meta tags များကိုဖန်တီးခြင်း
ဝဘ်ဆိုက် HTML code ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်း
FullSEO ၏အခြားအကျိုးကျေးဇူးများမှာ Semalt မှဝက်ဘ်ဆိုက်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် SEO-friendly အကြောင်းအရာဖန်တီးရန်အပြည့်အ ၀ ကူညီခြင်းဖြစ်သည်။
AutoSEO နှင့် FullSEO နှစ်မျိုးလုံးတွင်ပါ ၀ င်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်နှင့် SEO နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သောအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးရန်အတွက်ပါရမီရှိသည့် Semalt စာရေးဆရာများ၊ SEO အထူးကုများနှင့်အင်ဂျင်နီယာများနှင့်သင်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မည်။
Semalt ၏အဖွဲ့သည်အွန်လိုင်းကဏ္forအတွက်ထူးခြားသောအကြောင်းအရာများဖန်တီးရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိသည်။ စာရေးသူများသည် SEO အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များဖြင့်လမ်းညွှန်ထားပြီးမှန်ကန်သောအကွက်များကိုအမှန်ခြစ်ပေးသည့်အချောထုတ်ကုန်ကိုတင်ပြရန်ကတိက ၀ တ်ပြုသည်။
ထို့ကြောင့် coronavirus တွင် SEO ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်သည်။
နည်းလမ်းများစွာတွင်အနာဂတ်သည်မသေချာမရေရာနိုင်သော်လည်းအွန်လိုင်းစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် SEO သည်ဤတွင်နေရန်ဖြစ်သည်။